To: रञ्जु र रेणु दुवै परिवर्तनका प्रतीक हुन्
डा. रेणु अधिकारी - उनीहरु चुनाव हार्दा धेरैलाई खुसी पनि लाग्छ होला, तर म रन्जु र रेणुलाई भन्न चहान्छु तिमीहरू हारे पनि जित तिमीहरू कै हुनेछ। लामो समय देखि प्राप्त सत्ताको शक्ति, विभिन्न प्रकारले प्राप्त असीमित श्रोत, एकतर्फी प्रचारजस्ता कारणबाट प्राप्त शक्तिको सहयोगबाट जितेको भोटभन्दा तिमीहरुले प्राप्त गरेको भोट बढी प्रभावकारी हुनेछ।
शिव प्रकाश - हामी मानिसलाई उमेरले गुणा गरेर अनुभवको हिसाब निकाल्छौं । मानिसमा भएको आत्मविश्वास, साहस र उर्जाभन्दा ठूलो अनुभव के हुन्छ ? अनुभवले उर्जा जन्माउँछ भन्न सकिदैन तर उर्जाले अनुभव अवश्य जन्माउँछ । कर्मको स्रोत नै उर्जा हो । तिमीभित्र भएको त्यो उर्जा नै तिम्रो जित हो, रञ्जू ।
दिपेन्द्र झा - इतिहास पल्टायो भने गिरीजाप्रसाद कोइराला, बाबुराम भटराई र माधव नेपालको नाम आउँछ । यसकारण आफूले गर्दा सबै ठीक अरुले गर्दा बेठिक हुँदैन। विषयको गहिराइमा नगइकन गरिएको टिप्पणीले अरुको जीवनमा कति आघात पुर्याउँछ भन्ने हेक्का राख्न सक्नुपर्दछ। सञ्चारमाध्यममा आएको टिप्पणीको आधारमा जिम्मेवार निकायहरुको धारणाले भोलि अदालतबाट निर्दोष प्रमाणित हुने परिवारले कति असर गर्ला विचार गरौं।
गगन थापा - हेक्का राखौं, संक्रमणकालमा नै मन्त्रिपरिषद, न्यायालय, संसद जस्ता राज्यका अंगहरू र जिम्मेवार संस्थाहरू यसरी भड्किन थाले भने निर्वाचित जनप्रतिनिधिले मात्र गणतन्त्रको भार थेग्न सम्भव छैन। अझै राम्ररी स्थिर हुन नसकेका हाम्रा संस्थाहरुलाई अतिवादी बाटोबाट तुरुन्त फर्काउन जरुरी छ। तर त्यसरी फर्काउँदै गर्दा कुनै संस्था पनि हार्नु हुन्न र त्यसक्रममा फेरि कुनै गलत नजीर पनि स्थापित नहोस् !
दिपेन्द्र झा - कुनै पनि संवैधानिक निकाय र न्यायालयका मन नपर्ने पदाधिकारी र न्यायाधीशविरुद्ध एकचौथाइ सांसद भएको दलले डर देखाइराख्न पाउने भयो। आफूले भनेको फैसला वा निर्णय नलेखे रातारात निलम्बन गर्न सक्ने भयो। राणकालीन पजनीभन्दा पनि यो व्यवस्था खराब हुने भयो।
विशेष सम्पादकीय - केवल हल्काफुल्का भावनात्मक टिप्पणीमा उभिएर संविधानप्रदत्त संसदको विशेषाधिकार खोस्ने आधारको औचित्य पुष्टि हुन्न। कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकाभन्दा बढी संविधानको पालना गर्ने नैतिक दायित्व न्यायपालिकामा हुन्छ। तर, आज सर्वोच्च अदालतले भावावेशमा त्यो दायित्व भुलेर महाअभियोगविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएको छ। शक्ति सन्तुलनको न्यूनतम आदर्श उल्लंघन गरेको छ।
सरिता तिवारी - बुद्धिजीवि भनेको लोग्नेमान्छे मात्रै हुन्छ भन्ने सोचलाई विनिर्माण गर्न सक्ने महिलाहरू असंख्य भइसके। देख्नुपर्‍यो नि। त्यो देख्न आँखाको दृष्टी मात्रै होइन दिमागी दृष्टी नै फेर्नुपर्छ। इतिहास र समाजको मसिनो बोध गर्न, त्यो बोधलाई प्रशोधन गरेर ज्ञानको रुप दिन र त्यसलाई व्याख्यासमेत गर्न सक्ने महिला बौद्धिक नेपाली समाजमा छन्। समाजको लैङिगक संरचनामा जब्बर भएर बसेको दुराग्रहका कारण तिनले टुसाउने, हुर्कने र प्रसार हुने मात्र होइन स्वीकृत हुने सम्मको चरणमा पाइलैपिच्छे सिँगौरी खेल्नुपरेको छ।
रोहित खतिवडा - स्थानीय निर्वाचनको मुखमा दलका विकासका नारा गोनु झाका बाचा जस्तै हुन्, पूरा नहुने, पूरा गर्नुनपर्ने। दलहरूका नारा महत्वकांक्षी सपनाले भरिएका मात्र छैनन, तिनको स्थानीय निकायको चुनावसँग कुनै सरोकार छैन। त्यसैले यी नारा गलत समय र गलत ठाँउमा परेका छन्। Comments
चरण प्रसाई - नवराज सिलवाल प्रकरण देउवा–दाहाल जोडीको लागि एक वहानाबाजी मात्र हो। तिनका प्रमुख उद्देश्य भ्रष्टाचारलगायत सबैखाले अपराधबाट राजनीतिक उन्मुक्ति हो। अन्ततः स्वेच्छाचारी शासन प्रणाली स्थापित गर्नु हो। तर यसमा लागेका दुबै पार्टी र तिनका नेता अवश्य असफल हुनेछन्।
रामकृष्ण ज्ञवाली - के मणिपाल अस्पताल बन्द भएको विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय बेखबर थियो, थिएन। त्यहाँको पठनपाठन अवरुद्ध भएको विषयमा शिक्षा मन्त्रालय पनि जानकार थियो। दुवै मन्त्रालयमा औपचारिक र अनौपचारिक ढंगले मणिपाल प्रशासन र आन्दोलनरत पक्षले उजुरी पुर्याएकै थिए। तर वास्ता गरिएन। स्वास्थ्य र शिक्षा दुवै मन्त्रालयले बेलैमा ध्यान नदिँदा यो दुर्घटना निम्तिएको हो। अहिले आएर छानबिन गर्ने र लाइसेन्स खारेजीसम्मको सुझाव दिने र लिनेहरूले पहिले यस्तै एक्सन लिन किन सकेनन्?
जीवन क्षत्री - लोकतन्त्रमा संस्था र धरोहरहरु बनाउन गाह्रो हुन्छ, तिनको विनाश गर्न सजिलो हुन्छ भनेर नागरिकका रुपमा हामीले अहिले बुझ्नु अपरिहार्य छ। संस्था ध्वस्त पारेर व्यक्ति हावी हुने परिपाटी संस्थागत हुँदै गए अमेरिकाको जस्तो समुन्नत लोकतन्त्र त लड्खडाउँदो रहेछ भने हाम्रोजस्तो कमजोर र शिशु लोकतन्त्रमा न्यायालयजस्ता संस्थाहरुमाथि अहिलेको जस्तो आक्रमण कायम रहे हाम्रो समाज र निरपेक्ष अराजकताबीच कुनै पर्खाल बच्ने छैन।
अमित ढकाल - यो महाअभियोग प्रस्तावले सबैभन्दा ठूलो ‘ड्यामेज’ नेपाली कांग्रेस पार्टी र त्यसका सभापति देउवालाई गर्नेछ। तीनपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवाको नाममा कलंकको खातको त्यसै पनि कमी छैन। यो कलंक भने देउवाले अहिलेसम्म कमाएका कलंकहरुमा गजुर बनेर बस्नेछ।
पिताम्बर शर्मा - यी कुराहरूले बौद्धिक परम्परालाई अगाडि बढाउन सक्ने जमात बढेको छ भन्ने देखाउँछ। तर, यो परम्परालाई कहिँ-कतैबाट पनि संस्थागत संरक्षण, भरथेग छैन। राज्य बेखबर छ। राज्यका नीति अध्ययन-अनुसन्धानभन्दा पनि हचुवा र सनकका भरमा निर्देशित भइरहेका छन्। बेच्ने सामानको उपादेयता र गुणवत्ताप्रति उदासिन पसलेजस्तै विश्वविद्यालयको पसल खुल्छ मात्रै।
डा. भीष्मकुमार भूसाल, उपसचिव - कर्मचारी साथीहरु! हाम्रै केही साथीहरूले पनि भूकम्पमा ज्यान गुमाए। आजीवन देश सेवामा निःस्वार्थ खट्छु भने पनि ती फर्केर आउन सक्दैनन्। हामी भाग्यमानी हौं, ज्यूँदै छौ। तर हामीले ज्यूँदो रहेको प्रमाण आगामी पुस्तालाई दिन बाँकी छ। राजनीतिलाई गाली नगरौं। ती सिक्दैछन्। ***बादलले छेकेको उज्यालो केहीबेर जोडले बतास लागेमा खुलिहाल्छ। हाम्रा जुम्स्याई र लालफित्ताबाट माथि उठेर नयाँ मानक स्थापित गरौं। अबको ४ वर्षमा पुनर्निर्माणको सफल अवतरण गरेर हामीले आफूलाई प्रमाणित गरौं। फेरि आउने विपदमा एउटा सरकारी कर्मचारी पीडितको छेउ पुग्दा तिनले भनून्-विपद्को बेला सरकार आयो। सरकार मेरै हो। कसलाई थाहा छ, अर्को ५६ सेकेन्ड दोहोरिए हामी रहौंला नरहौंला।
सिके लाल - जसरी बहुमत सधैं सही हुँदैन भनेपछि सुकरातलाई विष पिउन बाध्य गरियो, अहिले त्यस्तो अवस्था आएको छ। लोकतन्त्र भनेको त बहुमत हो नि, त्यसमा प्रश्न उठाउन पाइन्छ? नेपाली राष्ट्रियता भनेको त लवेदा-सुरुवाल, नेपाली भाषा, हिन्दू धर्म हो नि, त्यसमा प्रश्न उठाउन पाइन्छ? भनिन्छ। यस्तो प्रश्न उठाउने व्यक्ति त सिधै देशद्रोही हुन्छ। अहिले यस्तो परिवेश बनेको छ।
केदारभक्त माथेमा - जापानको राष्ट्रिय टेलिभिजन च्यानलले संसारकै चारवटा प्राचीन सहरको सूचीमा काठमाडौंलाई पनि छान्यो। यसले हाम्रो यो सहर संस्कृतिमा कति धनी छ भन्ने देखाउँछ। संसारका धेरै ठाउँमा लोप भइसकेका पौराणिक सभ्यताका अंश हाम्रो काठमाडौंमा जीवित छ।
जगदीश घिमिरे - कमल पी. मल्लका अनुसार लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र बालकृष्ण सम नेपाली साहित्यकारहरू हुन् अर्थात् बौद्धिक होइनन्। म दाबा गर्छु- यिनीहरू यसमा समाजमा बौद्धिक कहलाउन योग्य मानिदैनन् भने नेपालमा कोही पनि बौद्धिक छैन। मलाई लाग्छ यिनीहरू नेपाली समाजका मात्र होइन, विश्व बौद्धिक समुदायका सदस्य हुन्। बौद्धिक हुन पीएच.डी. गर्नु पर्दैन। सबभन्दा ठूलो नेपाली बौद्धिक को भनेर सोधे म अलिकति पनि नहिच्किचाईकन भन्छु- गौतम बुद्ध, जससँग कुनै पनि प्रमाणपत्र थिएन।
हर्क गुरुङ 'लेखाली' - आजको नेपालको अवस्थामा जहाँ बुद्धिजीवीहरूलाई जनसाधारणबाट विरलै आर्थिक टेवा र प्रोत्साहन मिल्छ, त्यहाँ आर्थिक सुरक्षाको स्रोत कर्मचारीतन्त्रको आश्रयतिर बुद्धिजीवीहरू झुम्मिनु कुनै अचम्मको कुरो होइन । फेरि, बुद्धिवादी क्षमता र कार्यको सबभन्दा ठूलो उपभोक्ता सरकार हुनुका साथै आधुनिक शिक्षित समुदायको मुख्य निर्माता पनि उही सरकार नै हो र उखान छ, 'जसले मह काढ्छ उसले हात चाट्छ ।'
रविन्द्र अधिकारी - अबको स्थानीय सरकार भनेको सेवा प्रदान गर्ने मात्र होइन, आफ्नो विकास आफैं गर्ने, आफ्नो समृद्धि आफैं हासिल गर्ने र त्यो समृद्धि हासिल गर्न प्रदेश र केन्द्रसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्ने हो। हाम्रो पार्टीले यी तीनैवटा निर्वाचनका दृष्टिबाट स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्र जारी गर्न खोजेको छ।
कमलप्रकाश मल्ल - समाजका अन्य सदस्यहरूका विपरीत बुद्धिवादीहरूलाई आदर्शसँग यथार्थलाई कसीमा मूल्यांकन गर्ने, चिन्तन गर्ने र अलग हुने अधिकार हुन्छ। प्राथमिक रूपमा बुद्धिवादीहरूको कर्तव्य नै आफ्नो समाजको मूल्यांकन गर्नु हो। र नेपालमा बुद्धिवादीहरूको आर्थिक दरिद्र र बन्धनले गर्दा समाजको सेवा गर्न र यसप्रतिको “समाज ऋण” चुक्ता गर्न असफल भएका छन्।
कमलप्रकाश मल्ल - यसप्रकार शक्ति तथा नैतिक अधिकार भएका राजगुरुको अर्को बलियो अंशसँग मिसिएर बनेको यी बुद्धिजीवीहरूको खिचडी संगठन नै राणातन्त्र नामक शासनको जाँतो बनेको थियो। त्यसैले, बुद्धिजीवी वर्गको उत्थान र विकास एकलकाँटे प्रयासबाट समाजको अंश बन्ने सम्भावना त परै जाओस् यो प्रशासन समुदाय सिर्जनात्मक प्रेरणा एवं स्वतन्त्र बौद्धिकताको कुनै झिल्कोप्रति समेत विध्वंशकारी भावना राख्दथ्यो।
चन्द्रमा खुल्नुअघिको अपरान्ह
नारायण वाग्ले - मैले मोबाइल फिर्ता पाएपछि भर्खर खिचिएका फोटो हेर्दा तीनवटै पोजमा उनको एउटा आँखा बन्द थियो। भक्क परेका ठूला चश्माभित्र पनि उनले आँखाको कलाकारिता गरिसकेकी रहिछन्। त्यो एउटा स्टाइल थियो। नत्र त मस्त खुलेका ओठ र मदमस्त मुस्कान छरिरहेका आँखामध्ये एउटा झिमिक्क त गर्दैन नि।
जीवन क्षत्री - इतिहासले के भन्छ भने, बुद्ध, मोहम्मद र जिससजस्ता पथप्रदर्शकहरु जब विश्वमा थिए, उनीहरु देवताभन्दा बढी क्रान्तिकारी थिए। उनीहरुको प्रशंसा र स्तुतिभन्दा बढी निन्दा र विरोध हुन्थ्यो। जिससलाई त त्यतिखेरको सत्ताले आफूमाथिको खतरा ठानेर ज्यानसमेत लियो। ज्ञान प्राप्त भएलगत्तै मक्कामा मूर्ति पूजाको विरोध गर्दा कडा प्रतिरोध सामना गरेका मोहम्मद छ वर्षसम्म याथ्रिव नामक सहरमा विस्थापित भएनन् मात्रै (जसको नाम मोहम्मद गएपछि मदिना बन्न पुग्यो), उनले सिर्जना गरेको नयाँ व्यवस्था मक्काका पुराना सरदारहरुको सांघातिक आक्रमणमा पर्यो र त्यसमा विजयी भएका कारण मात्र उनी मक्कामा फर्केर आफ्नो पथप्रदर्शन जारी राख्न सके।
कृष्णप्रसाद सापकोटा - मधेसकै पनि आमजनताको धारणा स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउँ भन्ने पटक्कै छैन। स्थानीय तह बलियो भयो भने त्यहाँका डोम, चमार बलिया हुन्छन्, अरू जाति, जनजाति र दलितहरू बलिया हुन्छन्। त्यहाँका पछाडि परेका समुदाय बलिया हुन्छन्, जो हिजो शोषित-पीडित थिए। अहिले त्यहाँ जनताको अधिकार कटौति गरेर ठालूमा सीमित गर्ने षडयन्त्र भइरहेको छ।
नयाँ संशोधन प्रस्तावले मधेसीको माग सम्बोधन गर्छ?
दिपेन्द्र झा - नयाँ संविधान संशोधन प्रस्ताव मधेसीका लागि कोठामा राखेको प्लास्टिकको फलजस्तै हो। हेर्दा राम्रो देखिन्छ, तर खान सकिँदैन। संशोधन प्रस्ताव झट्ट हेर्दा आकर्षित देखिए पनि ठूला दलले आपसी मिलेमतोमा पास नहुने गरी ल्याएको देखिन्छ, केवल मोर्चालाई आस देखाएर निर्वाचनमा सहभागी गराउन। यसले मधेसी मोर्चालाई निर्वाचन जान ‘फेस सेभिङ’ दिए पनि मधेसको मूल मुद्दा सीमांकन सम्बोधन हुने सम्भावना न्यून छ। Comments
सिमराका स–साना सुस्केरा
नारायण वाग्ले - स्कुलबाट घर फर्किन लाग्दा अपहरणकारीले ल्याएको र त्यो कुरा बताएमा चक्कू हानेर मारिदिने धम्की दिएको सुनाएछन्। यात्रुहरूले तुरून्तै रेलवे प्रहरीलाई सूचित गरिदिए। उता घरपरिवारमा उपद्रव भइसकेको थियो। छिनछिनमा स्कुल फोन गर्ने, साथीभाइ, प्रहरी चारैतिर खोजखबर। बच्चा अपहरणको नियमित समाचारबीच आफ्नै बच्चा घर नफर्किँदा उनीहरू चरिफाल हुने नै भए।
अनुसन्धान नरुचाउने राज्य
देवराज हुमागाईं - प्राज्ञिक अनुसन्धानको विषय नेपाली राज्य सञ्चालकहरूको प्राथमिकतामा कहिल्यै परेन। त्यसैले स्वतन्त्ररूपले फाट्टफुट्ट भइरहेका अनुसन्धान प्रयासलाई कानूनी एवं प्रशासनिक व्यवधान खडा गरी हतोत्साहित तुल्याउन थालिएको छ। खुला समाजमा नागरिकको जीवन र चेतनास्तर उकास्न प्राज्ञिक अनुसन्धानको मुख्य भूमिका हुन्छ।
स्थानीय चुनावमा नयाँ दलहरुलाई किन विभेद?
उज्वल थापा - अाँट्ने हो भने त हामी निर्वाचन अायोगलाई अनुरोध गर्छौं- उम्मेद्वारको नाम र फोटो राखिदिनुहोस्। यो चिह्न वा त्यो चिह्नभन्दा यो नाम र दललाई सिधै भोट हाल्ने विधि सुरु गरौँ। नत्र हाम्रो लोकतन्त्र नै धरापमा पार्ने गरी नयाँलाई विभेद र पुरानैलाई पुरस्कृत गर्ने यो विधिले लुटतन्त्र ल्याउँछ।
बुझेर मात्र पत्याऊँ
सुजित मैनाली - नेताहरूले गलत तथ्यलाई दोहोर्‍याइरहने यी केही घटना मात्र हुन्। कतिपय गलत तथ्यलाई धेरैले भुलवश सही मानेर दोहोर्‍याउने गर्छन्। त्यस्तै एउटा गलत भनाइ हो– नेपाल जलस्रोतको दोस्रो धनी देश हो। नेपालमा धेरैले यो कुरालाई सत्य मान्छन्। तर नेपाल जलस्रोतका हिसाबले धनी नौ देशको सूचीमा पनि पर्दैन।
सेतोपाटी पाँचौं वर्षमा
पाँच वर्ष टेकेको सेतोपाटी छिट्टै नयाँ साजसज्जामा देखिनेछ। त्यसका लागि तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी गराउँछौं। यो वर्ष हामी स्वैच्छिक ग्राहक योजना पनि सुरु गर्नेछौं। त्यसमा प्रिय पाठकहरुको साथ रहनेछ भन्ने हाम्रो पूर्ण विश्वास छ। अार्थिक आत्मनिर्भरता दिगो र स्वतन्त्र पत्रकारिताका अाधारभूत सर्त हो भन्ने पनि हामी पाठकहरुलाई स्मरण गराउन चाहन्छौं। विस्तृतमा Comments